Shiinaha Custom cat qashin-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Qashinka bisadda
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:
1. Bisadda ugu fiican bisad - Guri diirran oo loogu talagalay xayawaankaaga:
(1) maro jilicsan, kaashmere, maro jilicsan iyo walxo kale oo la dhaqi karo, raaxo leh oo diirran.Waxaa sidoo kale jira casaan qafiif / bunni / cawl / beige / guduud / midab madow oo macaamiisha ay doortaan. , fududahay in la qaado, si fudud loo baxo.
(5) Xilliga xagaaga, salka waxaa lagu beddeli karaa maro mesh mesh tayo sare leh, oo aan sahlaneyn in la jabiyo, ku habboon nadiifinta, hawo qaadashada iyo neefsashada iyada oo aan ur gaar ah lahayn.
2. Ka waran haddii bisaddu seexan weydo guriga bisadda?
1 sayidku wuu ilaalin karaa meesha bisaduhu jecelyihiin inay seexdaan waqtiyo caadi ah, ka dibna meel bisadda dookha bisaduhu doortaan bisadu waxay jeceshahay inay seexato, inta badan aamusnaanta aragtida raaxada leh iyo meelaha furan, bisadaha ayaa doorbidaya, sidoo kale waxaa lagu dhex ridi karaa bisadda dhexdeeda qaar bisadaha jecel. tooy ama buste, bisadda bisaddu ha ku dhex noolaato sahamintiisa, urta caanka ah ayaa bisadda u xaqiijinaysa.
3. Xaddidaadaha alaabta (qeexitaannada) buulkeeda bisadda
Sublimation Heat / daabacaadda shaashadda / daabacaadda
3. Sidee loo doortaa aqal bisad ku habboon ama mid bisaddaadu jeceshahay?
Waa kuwan talo soo jeedin adiga ah:
(1ï¼ ‰ Villa bisadda weyn waa inaysan weynaan. Waa inay u dhigantaa sidiisa.
(2ï¼ ‰Qoriga adag waa kan ugufiican, maxaa yeelay qoryaha adag waa kuwo adag oo waara, waxaan isticmaalnaa firka, iyo urta firida lafteeda.
(3ï¼ ‰Waxaa jira godad yar oo ka haray bisadda buulkeeda, oo isagu jecel yahay inuu galo.
(4ï¼ ‰Ku xir xadhig hemp dusha sare ah boostada si loogu isticmaalo sidii loox xoqan bisad isaga u gaar ah, laakiin isagu wuxuu jecel yahay inuu afkiisa ciddiyo, sidaa darteed fadhiga salootada guriga ku yaal mar dambe lagama walwalin.
(5ï¼ ‰Ha ku rinjiyeynin bisadda buulkeeda buulkeeda adag, rinjiguu doono ha lahaadee, rinjiga biyaha salka ku haya ah maxaa, oo loo yaqaan dhadhan la'aan, laakiin bisadda bisaddu wuu urin karaa.
5. Xirxirida iyo rarida bacaha bisadaha
(2) Cabbirka hal baakidh ee caadiga ah: 43 * 23 * 34cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si aan kuugu keydinno xamuulka.
J: Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno iimaylkaaga ku-dalbashada.
S3: Ma leedahay amarka ugu yar?
J: Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka Shiinaha, bacda soo saare Shiinaha, ma nihin ganacsade.
J: (1) Waxaan kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso khidmadda tooska ah ee laga helo Shiinaha illaa waddankaaga.
Wareegga wax soo saarka ee kor ku xusan waa in lagu hagaajiyaa heerka tiknoolajiyada wax soo saarka iyo dhibka soo saarista qalabka. Sawirada la bixiyay ama shaybaarada waa in la hubiyaa si loo go'aamiyo meertada wax soosaarka saxda ah.
S9: oraah noocee ah ayaad aqbashaa Immisa maalmood ayaa lagu jiraa muddada qotominta?
Jawaab: (1) oraah sawir qaadis ah, xigasho ahaan sida ku xusan qoraalka nashqadeynta alaabta, oraah sida ku xusan tusaalaha la soo saaray.
(4) Haddii aad u baahan tahay oraah, fadlan la soco habka xigashada, kaas oo noo suurtagelin kara inaan si fiican kuugu soo bandhigno.
(3) Waxaan nahay soo saaraha sheyga Disney baseballbackpacks, boorsooyinka Wal-Mart iyo Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarkeena.
Calaamadaha kulul: Qashinka bisadda, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka